ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ခွေးများ Love ဖြစ်ရမည် : Life တွင်နယူး Leash
အားဖြင့် ကို Claire Cook က
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: နိုဝင်ဘာ. 19 2020 |6မိဖတ်ပြီးသား
“သင် molly သူ့ကို coddle မထားပါနဲ့, စာရာသည်,” အကြှနျုပျအဘကပြောပါတယ်. “ပဲသူ့ကိုသုံးရင်ပြင်တစ်ရက်ပေးမည်သေချာသူရုံးမှဝတ်ဆင်ရန်ဓာတ်အဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီရှိပါတယ်စေပါ။”
“ဘီယာပုလင်းလာူမူသည်အတိုင်းဤမျှလောက်ဆိုရင်, မိမိအဆဲလ်ဖုန်းပုန်းရှောင်,” ငါ့နှမကာရိုလ် Said. “မလုပ်ပါနှင့်, ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာမဆို, သူ့ကိုဖိဗေယစ်မူး dial ကြကုန်အံ့. ထိုမိန်းမအကြောင်းသည့်အခါသူကသူ့မြို့တော် B, နှင့်အတူစုန်းခဲ့သည်, ကျွန်တော်သူမကိုအစားထိုးရှာဖွေကြသောအခါထိုမိန်းမသည်တစ်ဦးမြို့တော် B, နှင့်အတူစုန်းဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။”
“အဘယ်ကြောင့်မိက္ခေလသည်သင့်အိမ်၌ဆက်နေရန်ရှိသည်ပါဘူး?” ငါ့နှမခရစ္စ Said. “ကျနော်တို့အခန်းများများရှိသည်, လက်နှင့်မျှမပြစ်မှားခြင်းသဘော, ဒါပေမယ့်ဒါကြောင့်သင်အမြဲသူ့ကိုဝက်ဖို့ရှိသည်လမ်းကိုမမျှတဘူးပါတယ်။”
လအကြာ, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ပေါင်း, သူအိမ်မှာနေထိုင်ခဲ့နေစဉ်အတူတကွသူ၏အိမ်ထောင်ရေးကျင်းပရန်ကြိုးစားနေ၏, မိက္ခေလသည်မရှိတော့ခြင်းအလိုတခုတည်းကမျှော်လင့်, တကယ်တော့, ဖိဗေ၏စိတ်နှလုံးသည် fonder ကြီးထွားအောင်. ဒါကြောင့်သူထွက်ပြောင်းရွှေ့ပြီးယခုသူသူ၏သမီးတို့ကိုနှင်ထုတ်, Annie နှင့် Lainie, ကျောင်းမှာအပြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကခုန်အိုင်ယာလန်ခြေလှမ်းရန်နှင့်ထိုနောက်မှညစာစားရန်သူတို့ကိုနှုတ်ယူ. သူတို့ကလည်းသူနှင့်အတူတိုင်းတနင်္ဂနွေကိုလွန်.
“သင်ကဖြစ်ရလိမ့်မည်မည်မျှကြာကြာစဉ်းစားကြဘူး?” ယောဟန်က Anderson တို့နောက်ဆုံးတော့မေးလျှင်. ဤသူသည်ငါ၏သိသာထင်ရှားသောအခြားဖြစ်လာခဲ့တဲ့လူထဲကသင့်လျော်မေးခွန်းကိုပုံရသည်.
“ငရဲ Freeze ကျော်လွန်းအဆိုးမြင်ထင်ရသည်အထိမ?” ငါကလည်း.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာ bumpy စတင်ပြီးနောက်, ဂျွန်နဲ့ကျွန်မချိန်းတွေ့ချမ်းသာကိုခြောက်လ shared ခဲ့. ကျနော်တို့ကိုကိုင်အပေါ်အခြေခံအားဖြင့်ယခုခဲ့ကြသည်. ကြှနျုပျတို့သညျဤမှတဆင့်ရရန်လုံလောက်ချမ်းသာအချက်များကို accrued င့်မယ်ဆိုရင်ငါညသန်းခေါင်ယံတွင်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အံ့ဩခြင်း. ထိုအချမ်းသာတဲ့သက်တမ်းရှိသည်ခဲ့ပါ? ကျွန်တော်ပုံမှန်ပြန်ပန်ကာမီးတောက်တတ်နိုင်သလောက်ရှေ့တော်၌လျစ်လျူရှု၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးမလား?
ယနေ့ည, ငါ့အစ်ကိုမိက္ခေလနှင့်ငါသည်ငါ့အိပ်ရာပေါ်ပြန်ကန်ခဲ့ကြ. အခြောက်အသန့်ရှင်းရေးအိတ်ဓာတ်ဖြူရှပ်အင်္ကျီတစ်ရက်သတ္တပတ်ရဲ့တန်ဖိုးရှိငါ့ treadmill ကျော် draped ခဲ့သည်. ကော်ဖီစားပွဲပေါ်တစ်ဝက်ကိုစားချိစ်ပီဇာနှစ်ခု flanked အချည်းနှီးဆမ်အဒမ်ဘီယာပုလင်း. ငါသည်အကောင်းတစ်ဦးအစ်မခဲ့သည်.
ထိုတနင်္ဂနွေကျော်, မိက္ခေလနှင့် Annie နှင့် Lainie ငါသည်ငါ၏ rickety အဟောင်းထပ်ခိုးလှေကားဖြိုကစားစရာတစ်ခုအမဲလိုက်ခြင်းအပေါ်သွားကြောင်း. ငါ့တူငါ့ကလေးဘဝ၏ relics နှင့်အတူအလွန်အမင်းအထင်ကြီးမဖြစ်အောက်ထပ်ကိုပြန်ဖြစ်ကြပြီးအချိန်မအတွက်ဆဲလ်ဖုန်းဂိမ်းအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ. ကြည့်ရသည်မှာငါ့အစ်ကိုမဟုတ်ရင်ခံစားခဲ့ရ, အခုအချိန်မှာသူသည်ငါ၏ကြီးပြင်းလာ Up ကိုအသင်းခေါင်းဆောင်ကစားစရာအရုပ်နဲ့ကစားခဲ့သောကြောင့်.
“သူမသည်တဦးနှစ်ဦးကိုအရုပ်င်, နှစ်ဆပျော်စရာများအတွက်!” ကျနော် 1970 စီးပွားဖြစ်ငါ့ peppiest အတုအပ၌ရွတ်ဆို.
အသင်းခေါင်းဆောင် Barbie ရဲ့နည်းနည်းအစ်မခဲ့သည်. နှစ်ဦးအဖြစ်မွှမ်းတင်နေခဲ့သောငါတို့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝ၏ Doublemint လိုပဲ, နှစ်, တဦးတည်းအတွက်နှစ်ဦး Mint, အသင်းခေါင်းဆောင်၏ဒီဗားရှင်းကယ့်တဦးတည်းအတွက်နှစ်ဦးအရုပ်ခဲ့သည်. သင်ပထမဦးဆုံးထိုမိန်းမကိုမြင်သောအခါ, သူမမွှေးအနည်းငယ်ဆံပင်ရွှေရောင်မူလတန်းကျောင်းဖြစ်သည်ထင်ရှား. သင်တို့မူကားနောက်ကျောသူမ၏ဘယ်ဘက်လက်မောင်းလှည့်လျှင်, သူမတကယ်ညာဘက်သင့်မျက်မှောက်၌ရင်သားကြီးထွားလာ.
Barbie ရဲ့မဖြစ်နိုင်ခန္ဓာကိုယ်ငါ့ပုံနှစ်များတွင်လုံလောက်တဲ့ငါ့ကိုချီလွဲချော်သွားတာမခံရလျှင်အဖြစ်. အသင်းခေါင်းဆောင်ကြီးပြင်းလာမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ငါသည်ငါ့ညစဉ်ညတိုင်းဆုတောင်းပဌနာဟူမူကားငါ့အိပ်ရာအနားမှာဒူးထောက်နေစဉ်တစ်လက်နက်ကိုင် backstroker တူနောက်ပြန်ငါ့ဘယ်ဘက်လက်မောင်းဝိုင်းသည်ငါ၏ prepubescent အသက်တာ၏အနည်းဆုံးတစ်နှစ်သုံးစွဲင့်. မေမေနှင့်ဖေဖေနှင့်ငါ၏ညီအစ်ကိုသုံးယောက်နှင့်ညီမနှစ်ယောက်ကောင်းကြီးပေးခြင်းငှါဘုရားသခင်မေးပြီးနောက်နှင့်တရုတ်ပြည်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်အစာရေစာငတ်ပြတ်နေကလေးများ, ငါသည်အ boobs အဘို့ဆုတောင်း, ငါ့နှမကာရိုလ်ရဲ့ထက်ပိုကြီး, နှစ်နှစ်အဟောင်းတွေသောသူကြီးနှင့်, ဘုရားသခင်၏စိတ်တော်, ခရစ္စရဲ့ပြငါ့ဆယ်လညီမမီရောက်ရှိလာ.
“ကြှနျုပျတို့ ... ရပါမညျ, ကြှနျုပျတို့ ... ရပါမညျ, ငါတို့သည်ငါတို့၏တွေဆီကတိုးမြှင့်ရမယ်,” သူတက်ဆင်း Up ကိုအသင်းခေါင်းဆောင်ရဲ့ဘယ်ဘက်လက်မောင်းကြီးပြင်းလာ pumped အဖြစ် Michael သမျှသောဤနှစ်အကြာတွင်ငါမှတပါးအခြားသောပြောပါတယ်. သူမ၏ရင်သားကသူ့ရှင်သန်ရေးအားထင်ရှားနှင့်ပြည့်စုံသောအချိန်တွင်ပျောက်ဆုံးသွား.
“ကပယ် Knock,” ငါကလည်း. ငါသည်ငါ့အဟောင်းအရုပ်ကိုတွေ့ပြီ.
မိက္ခေလသည်ကွယ်ပျောက်သူမ၏ yanked. “ငါ့ကိုအဘယ်သူသည်လုပ်လွင့်?”
“အကြှနျုပျကိုသူမ၏ပေးပါ,” ကိုယ့်အသင်းခေါင်းဆောင်များအတွက်ဆွဲယူလိုက်သည်အတိုင်းငါအော်. ဟောင်းအကျင့်စရိုက်တွေကိုကြိုးစားပမ်းစားအသေခံခြင်းနှင့်ရှိသမျှသော, ဒါပေမယ့်ငါ့ညီအစ်ကို, ညီအစ်မလမ်းကိုတကယ်အံ့သြစရာကြီးငါ nanosecond ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝလှူမှပြန်လည်ကောင်းမွန်နိုင်.
တစ်ဦးကအသံကျယ်ဟောင်ငါ့ကိုအခုန်ကိုဖန်ဆင်း. Mother Teresa, မိုက်ကယ်၏ humongous စိန့်. Bernard, ဖိဗေသူမ၏လွဲချော်သို့မဟုတ်ငရဲသည်အထိကျော်ထိန်းချုပ်ဖို့သည်အထိလည်းငါနှင့်အတူတည်းခိုနေသူ, အသင်းခေါင်းဆောင်ကြီးပြင်းလာဆွဲ.
မိက္ခေလသည်သူ၏ခြေရင်းမှခုန်ချ. “Mother Teresa, က drop ။”
သူမကသူအတော်လေး ကျော်လွန်. ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာမစွဲအချို့သောရှေးဟောင်းသားကောင်ကို-ဦးသေဆုံးပြီးထုံးတမ်းအတွက်သူမခေါင်းကိုခါယမ်းအဖြစ် Mother Teresa သူမ၏အံသွားအကြားအသင်းခေါင်းဆောင်ရဲ့ဘယ်ဖက်လက်မောင်းကိုကျင်းပ. အဆိုပါအရုပ်ရဲ့ရင်သားထင်ရှားတစ်ခုချင်းစီတုန်နှင့်အတူပျောက်ဆုံးသွား.
ငါမီးဖိုချောင်သို့ပြေးနဲ့ doggie အားရစရာအိုးတလုံးဆွဲ. ငါအရိုး-shaped ဘီစကွတ်ထွက်ကျင်းပ.
Mother Teresa တမျက်ခုံးမြှင့်တင်အားထင်ရှား.
“ကောင်းသော,” ငါကလည်း. “ဒါပေမယ့်တရားမျှတတဲ့သတိပေးချက်ကို, ကျနော်သုံးမှာလိုင်းဆွဲတာပါ။”
Mother Teresa ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာညင်သာစွာအသင်းခေါင်းဆောင်ကြီးပြင်းလာချထားနှင့်သူမ၏သုံးရယူထားသောစုဆောင်းကောက်ယူ.
“ဒါကြောင့်အငြင်းအခုန်င်,” ငါကလည်း. ငါသည်ငါ၏ drool ဖုံးအရုပ်ကိုကောက်နှင့်ငါ့ဂျင်းဘောင်းဘီအပေါ်သူမ၏ရှင်းပစ်ခြင်းစတင်. ငါသည်တပီဇာလက်သုတ်ပဝါပြန်လည်စဉ်းစားသုံးသပ်နှင့်ဆွဲ.
“ဒီမှာ, ငါရလိမ့်မယ်,” မိုက်ကယ်လ်ကဆိုသည်.
မိက္ခေလသည်ကြီးပြင်းလာ Up ကိုအသင်းခေါင်းဆောင် grooming အကုန်အစင်နှင့်စည်းချက်သူမ၏ဘယ်ဘက်လက်မောင်းချပေးမှပြန်ခဲ့.
ကိုယ်ကအကူအညီတစ်ခုအော်ဟစ်သံကိုသိခဲ့တာက. ငါသည်ငါ၏မောင်နှမရင်းတာဝန်ကအသိအမှတ်ပြု. ငါသည်အအသင်းခေါင်းဆောင်ကြီးပြင်းသူ့စိတ်ကိုပယ်ရင့်, ထိုအခါငါသည်ဖိဗေကိုချွတ်သူ့စိတ်ရင့်. ငါသည်သူ့ကိုသူ၏အိမ်ထောင်ရေးအပေါ်မှာရှိလေ၏နားလည်သဘောပေါက်ကူညီရှင်းလင်းသောနိမ့်ဆုံးမှ Annie နှင့် Lainie အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားနေသူနေစဉ်ကာလကသူ့ရဲ့ကွာရှင်းရေကြောင်းလမ်းညွှန်မှာသူ့ကိုကူညီရန်င့်. ပြီးတော့သူ့ကိုငါကပိုပြီးသင့်လျော်သောပွဲစဉ်ရှာတွေ့ချင်ပါတယ်. အဖြစ်မကြာမီရှိသမျှကိုငါပယ်ရှားနှစ်ထပ်ကထအဖြစ်, ယောဟန်က Anderson တို့ငါအတူတကွလာပါနေဝင်ချိန်သို့ဖြတ်စီးလို.
“ငါအတွက်ထုပ်ပိုးမယ်ထင်,” မိုက်ကယ်လ်ကဆိုသည်. “သင်သည်ငါ့ကိုတဦးထက်ပိုသောအချိန် Mother Teresa ထဲကယူစေချင်, သို့မဟုတ်သင်အိပ်ရာမှပယ်ဦးရှေ့၌သင်တို့သူမ၏ရနိုင်?”
Mother Teresa ကျော်ထောက်နှင့်ငါ့ပါးကိုသူတပ်. ကျွန်မသက်ပြင်းချကာ. “ကျွန်မသူ့ကိုယူပါလိမ့်မယ်။”
မိက္ခေလသည်ညှိုးငယ်ဝက်လှိုင်းလုံးကိုပေး၏. “G'night, စာရာသည်. ည, Mother Teresa ။”
သူက guestroom မျက်နှာသို့တစ်မပျော်ခြေလှမ်းကိုယူ.
သူသည်နောက်သို့လှည့်. Up ကိုကြီးထွားလာအသင်းခေါင်းဆောင်သည်သူ၏လက်နက်အတွက် cradled ခဲ့သည်.
ငါ့လက်ကိုငါထွက်ကျင်းပ. “အကြှနျုပျအရုပ်ကိုပေးပါ, မိက္ခေလသည်။”
မာတောင်နေတဲ့အဲဒီမှာထိုင်နေတော်, သူမ၏အသစ်အကြိုက်ဆုံးအရပ်ဌာန၌ Mother Teresa ကုပ်ခြစ်, ညာဘက်သူမ၏ဘယ်ဖက်နားနောက်နားတွင်. ထိုအခါငါထနှင့်ငါ့ဟောင်းများမာစတာအိပ်ခန်းမှ tiptoed, ငါရုံးခန်းသို့လှည့်အဘယ်မှာရှိငါသည်ငါ၏စာသင်ခန်းများအတွက်စီမံကိန်းများနှင့်သိုလှောင်ထားသောအပိုအရာအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့င့်.
ငါအောက်ခြေမှာရေတိမ်ပေါ် scrapbooks ၏ပုံမှတဆင့် rummaged. ငါသည်ငါ၏မင်္ဂလာဆောင်အယ်လ်ဘမ်ဆွဲထုတ်, တလက်နှင့်အတူပယ် dusted, ခဏကကျင်းပ. ငါသည်ငါ့မျက်စိကိုပိတ်နဲ့ Kevin ပုံဖော်ဖို့ကြိုးစားခဲ့, ငါ့ခင်ပွန်းဟောင်း. ငါသည်အ conjure နိုင်သမျှအားလုံးသည်ဦးကိုအိမ်သာထိုင်ခုံပေါ်မှာထိုင်တစ်ဦးကလူသား၏မရေပုံရိပ်ခဲ့သည်, သူ၏ဦးခေါင်းကိုသတင်းစာနောက်မှာဖုံးကွယ်ထားတဲ့, မိမိအဖမျက်သို့မှီပတ်လည်မှာသူ့ရဲ့ဘောင်းဘီ, ရေချိုးခန်းတံခါးကိုဖွင့်လှစ်. ကီဗင်ယခုတစ်အိုင်ပက်ဒ်အပေါ်သူ၏နံနက်သတင်းဖတ်လျှင်ကျွန်မအံ့ဩခြင်း.
နောက်ဆုံး, ငါသည်ချိန်းတွေ့မြင်ကွင်းတစ်ခုရေကြောင်းလမ်းညွှန်နေစဉ်ကိုမစောင့်င်မှတ်စုစာအုပ်ကိုတွေ့ရှိ. ငါ့ရက်စွဲများအသီးအသီးအဘို့အတစ်စာမျက်နှာ, လက်-ရေးဆွဲကြယ်နဲ့အလံများနှင့်အတူ rated. ဒါကြောင့်တစ်ဦးကားအရောင်းမှာရောင်းချသဏ္ဍန်သောစာမျက်နှာများကိုထိပ်အနှံ့ဒါကြောင့်အများအပြားအနီရောင်အလံများလွ်ံ. မြို့႟ှိ Hanover မှဂျော့ခ်ျ, သူတစ်ဦးတစ်လတစ်ရက်ဆက်ဆံရေးကိုရှာဖွေခဲ့, အဘယ်သူမျှမကြိုး, အဘယ်သူမျှမကတိကဝတ်. ကျွန်တော် ... ဖြစ်ချင်ပါတယ်, မိမိ၏ကိုယ်ပိုင် Alfafa ဟာပင်ပေါက်ကြီးပြင်းသောသူ. တစ်ပေါင်းအရွယ်အမျိုးသမီးကိုရှာနေကောင်လေး, ငါသည်ထိုအမျိုးသမီးစာလုံးလမ်းကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့အကျဉ်းချုံးတစိတ်တပိုင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားချင်ပါတယ်ဘယ်သူကို, ငါမူကားတွေအများကြီးကိုစားနိုင်အများအားဖြင့်ကြောင့်. ray Santia, ငါသည်အလုနီးပါးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်င့်ယခင်နီးပါးဟော်ကီကြယ်ပွင့်. Bob ကကော်, ကျနော်တို့နှင့်အိပ်ပျော်မသငျ့တဲ့ကျောင်းသားတစ်ဦး၏ဖခင်.
ဒါဟာထွက်အဲဒီမှာတောတွင်းခဲ့သည်. ညံ့ဖျင်းသောမိက္ခေလသည်. သို့သော်လည်းငါသည်ငါ့အိမ်ထွက်နဲ့သူ့စိတ်ရွှင်လန်းလမ်းပေါ်မှာသူမရရှိလျှင်, ငါသိခဲ့တယ်ရှေ့၌ငါထွက်ပြန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဖြစ်စေခြင်းငှါ,.
ငါအတွေးမှာကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်တဲ့အခိုက်ကိုယူ. ထိုအခါငါသည်ငါ့အစ်မကာရိုလ်ငါ့အဘို့ဝေငှခဲ့သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြော်ငြာတွေ့ရှိ, စာမျက်နှာတစ်ခု၏ဗဟိုသို့ taped.
Voluptuous, sensuous, alluring နှင့်ပျော်စရာ. အနိုင်နိုင် 40 DWF starlit နေရသကဲ့သို့မျှဝေဖို့အထူးလူကိုရှာတတ်၏. ခွေးချစ်ရမည်.
ငါဧည့်ခန်းမှထဲကငါ့ချိန်းတွေ့မှတ်စုစာအုပ်သယ်ဆောင်, ငါ့အကြိုက်ဆုံးအနီရောင်ခဲတံနှင့်အတူ. ငါသည်ငါ့အစ်ကိုနှင့်ကိုက်ညီရန်ကြော်ငြာ tweaked နေစဉ်ကိုယ့်လတ်ဆတ်သောကောလိပ်ကျောင်း-စီတန်း page ကိုလှည့်နှင့်ငါ့အံသွားခဲဆန့်ကျင်ခဲဖျက်ယောက်ကတော့.
ရိုက်ကူးခြင်းအတွက်, လျှမ်းလျှမ်းတောက်, ပြုပြင်မှုထက် ကျော်လွန်. ကျိုးပဲ့မဟုတ်. မိမိလူအပေါင်းတို့ဆံပင်သူ၏သမီးနှင့်ကိုက်ညီသောသူသည်အထူးအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုရှာဖွေနေသည်နှင့်အတူ DWM ဖြစ်မကြာမီရုပ်ချော’ မြင့်မားတဲ့စံချိန်စံညွှန်း. ကြီးမားတဲ့ slobbery ခွေးချစ်ရမည်.
(ကို Claire ကွတ်၏နောက်ဆုံးပေါ်စာအုပ် '' ထံမှခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူပုံနှိပ်ခွေးများ Love ဖြစ်ရမည် – Life တွင်နယူး Leash’ – စာအုပ်2အရောင်းရဆုံးရမယ်အချစ်ဆိုတာခွေးများစီးရီး. သင်သည်အကို Claire နှင့်သူမ၏စာအုပ်တွေမှာအကြောင်းကိုပိုမိုထွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည် www.clairecook.com)